Lenovo na-egosi Moto Z Play, Motorola nwere ikike ndi ọzọ nke oge | Akụkọ akụrụngwa
Nyaahụ, Lenovo malitere idokwa ya Ngwa ma chee ha n'ihu ọha. N'etiti ngwaọrụ ndị a anyị maara Moto Z Play, a phablet na anyị nụrụ ọtụtụ ihe na-adịbeghị anya ọnwa na ugbu a, anyị nwere ya na eze.
Ọhụrụ Moto Z Play enweghị ọnụ ala dị oke ọnụ ala mana ọ nwere nnukwu ngwaike na ohere nke ịgụnye ụfọdụ ndọtị na-enye ohere ịmeziwanye akụkụ dịka foto mkpanaka. Otú ọ dị, Moto Z Play ka nwere Oghere isi okwu 3,5mm, ihe yiri ka ọ na-agbanwe na mmelite n'ọdịnihu na ụdị ahụ.
The Motomods bụ ngwa ndị ama ama ga-agbasawanye ọrụ nke Moto Z Play
Ọhụrụ Moto Z Play nwere ihuenyo SuperAMOLED nke 5,5-anụ ọhịa na mkpebi FullHD, ihe nhazi ahụ ga-abụ Qualcomm Snapdragon 625 tinyere 3 Gb nke ebule. Nchekwa dị n'ime ga-adịgasị iche dabere na mbipute ahụ, mbipute dị ugbu a nke 32 na 64 Gb nke oghere dị n'ime. Tinyere processor ahụ, Moto Z Play ga-enwe Adreno 530 GPU. Na mgbakwunye na ese foto abụọ ahụ, ọnụ ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'ihu na njikọta na azụ ga-enye ohere ịgbakwunye ọrụ ọhụrụ na njedebe. Na igwefoto n'azụ anyị na-ahụ ihe mmetụta 16 MP na f / 2.0 na ngwa anya ihe na-eme ka ihe ngosi ka igwefoto dị n'ihu nwere ihe mmetụta 5 MP na flash.
Batrị nke Moto Z Play nwere ikike nke 3.510 mAh, ikike nke na-adịchaghị elu mana nke ahụ ga-enye nnwere onwe dị ukwuu na mkpanaka ahụ. Dabere na ihe ngosi nke Motorola na Lenovo, ọnụ ọnụ a ga-enwe ihe ruru elekere 50. nke agwakọta agwakọta, nnwere onwe dị ukwuu ma e jiri ya tụnyere njedebe ndị ọzọ nke akara Moto.
Agbanyeghị, ọnụahịa ekwentị a abụghị nke dị n'etiti mana ọ na-aga n'ụzọ dị elu, ịbụ 400 dollar ọnụahịa mbụ nke ekwentị a. Otu n’ime ọghọm ma ọ bụ ọghọm nke ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ọdụ a. N'agbanyeghị nke ahụ, ngwaike adịghị njọ ma ọlị na maka ndị ọrụ anaghị eji ekwentị eme ihe ọ nwere ike bụrụ nnukwu ụzọ ọzọ ọ bụ ezie na ọ ga-adị mkpa ịhụ etu ọdụm a si akpa ike kwa ụbọchị, ịghara ịkọwa omume nke Motomods ma obu mgbakwunye nke jikọtara na azụ nke ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Lenovo na-enye Moto Z Play, Motorola nwere ikike ndi ozo nke oge a
Njem na ndị nwenda nke dara dara na PlayStation Plus na Septemba